अभिनेत्री रेखाको प्रश्न, ‘के राजनीति भनेको नामको खेल मात्र हो ? – " सुलभ खबर "
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालीकाले रत्नपार्कको नाम फेरेर संखधर साख्वा उद्यान नामाकरण गरिसकेको छ । रत्नपार्कको नाम फेर्न हतार गरेको महानगरपालीकाले त्यही नजिक भात खानका लागि विहानदेखि कुर्ने गरिव निमुखालाई नदेखेको आरोप उसलाई लाग्दै आएको छ ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री अभिनेत्री रेखा थापाले पनि यस बारे प्रश्न उठाएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिव निमुखको बारेमा कसैले पनि कुरा नउठाएको बताएकी छन् । रत्नपार्कको नाम फेर्न हतारो गर्नेले त्यही नजिकका गरिब नदेखेको गुनासो उनको रहेको छ ।
उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् ‘रत्नपार्कको नाम फेर्ने र जोगाउने ध्याउन्नमा लागि रहँदा, छेउको बसपार्कमा भुइमा बसेर खाना पर्खेको गरिव निमुखाको बारेमा बोल्ने कस्ले हो । ‘कि राजनीति भनेको नामको खेल मात्रै हो ? भनेर उनले प्रश्न समेत उठाएकी छन् ।